Zimbabwe's Catholic Bishops Back Archbishop in Sex Scandal | Voice of America - English
A controversy surrounding participation by Zimbabwe?s president at the Euro-African summit to be held in Portugal has taken another turn, with a call from the summit commissioner for President Robert Mugabe to be represented by his foreign minister at a lower level. However, some analysts believe African heads of state, including South Africa, would insist that Mugabe be allowed to attend the EU-Africa summit. Some European officials say reaching a compromise to allow the summit to…
Lawyers for Zimbabwe's main opposition leader say he was arrested and charged with disorderly conduct in connection with his recent tour of the nation's retail stores. Attorneys for Movement for Democratic Change (MDC) leader Morgan Tsvangirai say he was questioned by police for two hours Thursday in the capital, Harare, before he was charged and released. An MDC spokesman says Tsvangirai led reporters on a tour of retail stores last month after government…